Mmemme Nyocha | December 2019
Ugboro ole ka anyị na-abanye n'ime nsogbu vidiyo, nke anyị na-adịghị edekọ na kamera kacha mma. Mana ugbu a, enwere ike gbanwee ya n'enweghị azụta ngwa ngwa. N'ihi usoro ihe nkiri Cinema HD, ị nwere ike ịgbanwe àgwà nke vidiyo ahụ, ma maka nke ka mma na nke ka njọ, nke na-agbanwe nha ya. Cinema HD bụ usoro mgbanwe nke e mere iji melite ogo vidio ma gbanwee ya na ụdị usoro.
Ọtụtụ ndị ọrụ Windows ga-ekweta na iTunes, nke na-achịkwa ngwaọrụ Apple, enweghị ike ịkpọ ezigbo maka sistemụ arụmọrụ a. Ọ bụrụ na ị na-achọ àgwà ọzọ maka Aytüns, gbanwee ntị gị na ngwa dị ka iTools. Aytuls bụ ihe dị elu ma rụọ ọrụ ọzọ na iTunes a na-ewu ewu, nke ị nwere ike ijikwa ngwaọrụ Apple.
Ụzọ kachasị mfe iji bulie mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ na nkọwa nke ọdịdị akụkụ anọ na ngwanrọ pụrụ iche. Ha ga - enyere aka mee ka usoro a dị mfe ma mee ka ọ dị mfe. Taa, anyị na-elele otu n'ime mmemme ndị a, ya bụ ỤWA. Ka anyị kwuo banyere atụmatụ na ọrụ ya. Ka anyị malite nyochaa.
Akwụkwọ electronic na-eji nwayọọ nwayọọ dochie akwụkwọ, ugbu a onye ọ bụla na-agbalị ibudata ma gụọ akwụkwọ na mbadamba nkume ma ọ bụ ngwaọrụ ndị ọzọ. Ụdị e-akwụkwọ ọkọlọtọ (.fb2) adịghị akwado usoro mmemme Windows. Ma site n'enyemaka nke AlReader, usoro a na-aghọ ihe a pụrụ ịgbanwe maka usoro ahụ. AlReader bụ onye na-agụ na-enye gị ohere imeghe faịlụ na usoro *.
Ka ọ dị ugbu a, a na-eji otutu ngwanrọ arụ ọrụ maka ikpọ diski, n'etiti nke enwere nchịkọta nchịkọta na nhazi ọrụ. Ntụle DeepBurner ngwanrọ a tụlere ga-eme ka ị nwee ike ịmepụta ọrụ na interface dị mfe na-agụ. Otu ihe arụmọrụ na-eme ka o kwe omume ịdekọ diski na ozi ọ bụla.
N'ihe banyere ide ihe na diski, ihe a maara nke ọma na Nero na-abata n'uche. N'ezie, usoro a emewo ka o guzosie ike dịka ngwá ọrụ dị irè iji kpochapụ diski. Ya mere, ọ bụ maka ya taa ma a ga-atụle ya. Nero bụ otu ọnụ na-ewu ewu maka ịrụ ọrụ na faịlụ na diski ọkụ, nke nwere ụdị ngwanrọ dịgasị iche iche, nke ọ bụla dị iche na ọnụ ọgụgụ ọrụ enyere na, ya mere, na ọnụahịa.
Foto Tux 0.9.22
StopPC bụ abamuru n'efu nke ndị ọrụ ha nwere ike ịmepụta oge mgbe kọmputa ahụ na-agbanyeghị aka. Site n'enyemaka ya, ị nwekwara ike belata ike ọkụ, ebe ọ bụ na PC ndị ọzọ agaghị adị nro na-abaghị uru. Omume ndị a na - enweta Na mgbakwunye na ike njikwa nke ngwaọrụ ahụ, ị ​​nwere ike ịhọrọ otu n'ime njikwa ndị a na StopPK: mechie usoro ahọrọ, tinye PC n'ime ọnọdụ ụra, kwụpụ njikọ Ịntanetị.
Ndị na-egwu egwu na ndị na-ede egwú bụ ndị na-amalite ịmepụta abụ ọhụrụ ma ọ bụ na-agbalị ịchọta ụzọ ziri ezi maka ụda egwu ha nwere ike ịnwe usoro ndokwa nke ga-eme ka ọrụ ahụ dị mfe. Ngwa ndị dị otú a nwere ike ịdị mkpa na ndị na-egwu egwu na-achọ igosi ihe ha mejupụtara na njikere, nke a kwadebere, mana ha enwebeghịkwa nkwado ndabere.
SUPER 2015 Mee 69
Otu n'ime usoro kachasị ewu ewu mgbe ị na-arụ ọrụ na vidiyo na-eme ka ha si n'otu usoro gaa na nke ọzọ. Na iji rụọ ọrụ a, ị ga-achọ ịgbanyere aka nke mmemme ọkachamara. Otu n'ime mmemme ndị a bụ SUPER. SUPER bụ software n'efu nke isi ọrụ bụ ntụgharị vidiyo.
Copensible Copier - software e mere iji detuo ma bipu faịlụ, weghachite data mebiri emebi, nakwa maka ndabere. Dekọọ ọrụ Ịmepụta akwụkwọ na ndekọ aha na-arụ ozugbo na windo ihe omume dị mkpa mgbe ịkọwapụtara isi na ebe.
A na-echekarị na mmepe egwuregwu bụ ihe mgbagwoju anya, usoro nke na-ewe oge na-achọ ihe ọmụma zuru ezu banyere mmemme. Ma gịnị ma ọ bụrụ na ị nwere usoro pụrụ iche nke na-eme ka ọrụ dị otú ahụ siri ike mgbe ụfọdụ dị mfe? Usoro mmemme Nrụpụta 2 na-agbaghasị echiche banyere ịme egwuregwu. Ọrụ 2 bụ onye mmepụta maka ịmepụta egwuregwu 2D ụdị ọ bụla na ụdị ọ bụla, nke ị nwere ike ịmepụta egwuregwu na ntanetị niile a ma ama: iOS, Windows, Linux, Android na ndị ọzọ.
SMS-Ọhazi bụ usoro dị ike maka iziga ozi dị mkpirikpi gaa na ekwentị mkpanaaka ma na-eduzi mail mail. Ngwa ozi na-enye gị ohere iziga ọtụtụ ozi SMS na ndị ị debanyere aha. Oge ọsọ nke usoro ihe omume ahụ dị elu - aka 800 leta kwa ụbọchị. Iji nwalee arụmọrụ a na-enye ohere ịmepụta mbupụ n'efu 10.
Ikwu okwu mgbe nile maka ihe omume ahụ-onye nsụgharị dị mfe ma baa uru. Omume a na-amụba okwu nke asụsụ a na-amụ. Mmemme ndị dị otú ahụ na-asụgharị ngwa ngwa site na ibe weebụ, ozi-e ma ọ bụ akwụkwọ. Otu onye nsụgharị dị otú a bụ Dicter. Usoro a na-asụgharị odide ederede (mgbe enwere Ịntanetị).
PhysX FluidMark bụ mmemme site na ndị mmepe Geeks3D, haziri iji tụọ arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ na nhazi kọmputa mgbe ọ na-emegharị ma na-atụle usoro ihe ọmụmụ nke ihe. Nlekọta cyclic N'oge ule a, a na-atụle arụmọrụ na nkwụsi ike nke usoro ahụ n'okpuru nrụgide nrụgide.
Site n'enyemaka nke ọrụ TweakNow RegCleaner, ị nwere ike iweghachite usoro sistemụ ngwa ngwa ya. Iji mee nke a, usoro ihe a na-enye nnukwu ọrụ nke ga-enyere aka ịnagide nsogbu ọ bụla. TweakNow RegCleaner bụ ụdị ngwakọta nke a pụrụ iji maka nzube dị iche iche.
Site na mmalite oge mmepe mmalite, ihe ọ bụla egwuregwu na-ekpebi ọ bụghị naanị na echiche ya, kamakwa na teknụzụ ga-eme ka o mezuo ya. Nke a pụtara na onye mmepụta kwesịrị ịhọrọ egwuregwu egwuregwu nke a ga-egbu egwuregwu ahụ. Dịka ọmụmaatụ, otu n'ime engines ndị a bụ Unreal Development Kit.
Acronis Disk Director bụ otu n'ime ndị nnọchiteanya kachasị amara nke ngwanrọ nke na-enye gị ohere ịmepụta ma dezie akụkụ, yana ọrụ na diski ahụ (HDD, SSD, USB-flash). Ọ na-enye gị ohere ịmepụta bọtịnụ diski ma weghachite ehichapụ ma ọ bụ mebie ihe ọ bụla. Anyị na-adụ gị ọdụ ka ị leba anya na: mmemme ndị ọzọ maka ịhazi disk diski. Ịmepụta olu (nkebi) Usoro ihe a na-enyere aka ịmepụta mpịakọta (nkewa) na disk (s) ahọrọ.
TeamTalk bụ mmemme maka olu otu na ederede okwu n'ime ụlọ na otu nkesa. Onye ọrụ ahụ nwere ike ịmepụta ma ọ bụ họrọ ihe nkesa nke mmasị maka n'efu ma sonye na mkparịta ụka na ndị ọzọ so na ya. Ọzọ, anyị na-atụle n'ụzọ zuru ezu ọrụ na ngwaọrụ dị iche iche nke ngwanrọ a.
Enwere mmemme pụrụ iche nke na-enyere nyochaa arụmọrụ na nkwụsi ike nke usoro ahụ, na nke ọ bụla dị iche iche. Iduzi ule ndị dị otú ahụ na-enyere aka ịchọpụta isi ihe na-adịghị ike nke kọmpụta ma ọ bụ chọpụta ihe ọ bụla ọdịda. N'isiokwu a, anyị ga-enyocha otu n'ime ndị nnọchianya nke ngwanrọ dị otú a, ya bụ Dacris Benchmarks.